Ogige Ihe Nketa na Nchọgharị Lullymore - IntoKildare
Lullymore Heritage & Discovery Park bụ Nleta onye ọbịa na -emeri ụbọchị mmeri nke dị na agwaetiti Lullymore nke nwere echiche panoramic nke Bog nke Allen a ma ama. Naanị otu awa si Dublin dị n'etiti obodo nta Rathangan na Allenwood, Park bụ ebe zuru oke maka ndị nọ n'afọ ndụ niile iji zuru ike ma zuo ike.
Enwere ihe maka onye ọ bụla - ezinụlọ na -achọ mmụta na ihe ọchị na gburugburu nchekwa, ndị hụrụ ọdịdị, ndị na -anụ akụkọ ihe mere eme, ndị na -ejegharị na ndị na -eme mkpọtụ!
Ndị ọbịa niile nwere nnwere onwe inyocha ihe ebube dị na Lullymore n'okporo ụzọ buru ibu na oke ọhịa dị larịị dị jụụ yana na peatland biodiversity boardwalk. N'okporo ụzọ, ị ga -ekpughe ihe ngosi mmekọrịta na -agwa akụkọ ihe mere eme nke Lullymore nwere njikọ nke Pagan gara aga, saịtị Monastic maka afọ 1000, ebe mgbaba maka ndị nnupụisi na 1798 na ụlọ mgbanwe mgbanwe ụlọ ọrụ na 20.th Narị Afọ. Ugbu a na mmalite nke oge akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ, Ogige ahụ na -egosi anụ ọhịa dị ịtụnanya nke anụ ọhịa Irish na mmekọrịta na -adịgide adịgide na peatlands.
A na -ejikwa nnukwu egwuregwu egwuregwu mpụga na oghere oghere 18, njem ụgbọ oloko, ugbo anụ ụlọ na ịchụ nta akụ anwansi iji nweta ọ funụ. Ebe a na -adọba ụgbọala n'efu na WIFI. Café nwere oche karịrị 200, zụọ ahịa na saịtị yana ịnweta oche nkwagharị.
Ntinye akwụkwọ n'ịntanetị dị mkpa, biko pịa Ebe a ime akwụkwọ
Nnukwu ihe ọchị na mmụta a na-eme Lullymore ka ọ bụrụ '' ihe kwesịrị ịhụ. mgbe ị na -aga Kildare. Nwee ọ visitụ na nleta gị wee chọpụta anwansi nke Lullymore!
Adventure & Ihe, Ihe nketa na akụkọ ihe mere eme, Outdoors, Kwado Mpaghara, Nwee ezumike ezinụlọ, Nature & Anụ ọhịa, Kildare
Rathangan, Obodo Kildare, R51 E036, Ireland.
Mepee Mọnde - Sọnde 10am - 6pm